War Deg Deg Ah : Dagaal u dhaxeeya Ciidamada Galmudug iyo kuwa Al-Shabaab oo xiligan kasocda gobalka mudug – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada maamulka Galmudug iyo kuwa Al-Shabaab uu xiligan kasocdo deegaano kuyaal bariga gobolka Mudug.
Dagaalka oo ka socda Deegaano ku dhaw daw Bud Bud ayaa lagu soo waramayaa in labada dhinac ay isku adeegsanayaan hubka culus iyo kuwa fudud, waxaana goobaha dagaalka kusii qul qulaya ciidamo badan oo wata gaadiidka dagaalka oo katirsan maamulka Galmudug.
Dagaalyahanada Al-Shabaab ee la dagaalamaya ciidamada maamulka Galmudug ayaa la sheegay in ay yihiin kuwii dhawaan dagaalka la galay ciidamada maamulka Puntland kana soo degay xeebta Deegaanka Garacad.
Dagaalka u dhaxeeya Ciidamada maamulka Galmudug iyo dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa waxaa ka dhahay qasaaro dhimasho iyo mid dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray, waxaana adag in xog dheeraad ah laga helo halka ay dagaladu kasocdaan oo isgrasiinta ka go’antahay.
Saraakiisha Maamulka Galmudug ayaa sheegay in ay ka go’antahay in ay gacanta kusoo dhigaan dagaalyahanada Al-Shabaab ee soo galay deegaano uu gacanta ku hayo Maamulka Galmudug, ayna hada baacsanayaan dagaalyahanada Al-Shabaab.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ugu baaqay Shacabka Galmudug in ay ciidamada la shaqeeyaan kana gacan siiyaan dagaalka ay kula jiraan dagalayahanada Al-Shabaab ee kaso galay dhinac Puntland.